မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အသုံးဝင်မဲ့အချက်လေးတွေ - ဒိုးမယ်
ဒါဖတ်ပြီးမှ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်ပါ! ကဲ အခုမှ မီးဖိုချောင်ထဲ စဝင်မဲ့ အိမ်ရှင်မတွေရော အိမ်ရှင်ထီးတွေရောအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်လေးတွေပေါ့။ မီးဖိုချောင်ထဲရောက်မှ ခေါင်းကုတ်နေရမဲ့အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ဖတ်ထားလိုက်တော့နော်။
အခုမှ မီးဖိုချောင်ထဲကို စဝင်မယ်ပြင်နေတဲ့ ကိုကိုမမတို့ရေ.. ကိုယ်က အကျွမ်းကျင်ကြီးလည်း မဟုတ်သေးတော့ ဓားကိုင်တာကအစ အချိုးမကျသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် အရမ်းကို စိတ်ရှုပ်ရတာပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး ခဏခဏမဖြစ်ရလေအောင် တချို့အသုံးဝင်တဲ့အချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်..
ပထမဆုံးအချက်က တစ်ခုခုလှီးနေတုန်း အောက်က ပလတ်စတစ်အခံပြားက ချော်ချော်ထွက်နေလို့ လှီးရတာအဆင်မပြေဖြစ်ဖူးလား? အဲ့လိုဆိုရင်တော့ ဖြေရှင်းနည်းလေးရှိပါတယ်နော်။ ရေစိုအဝတ်လေးတစ်ခုကို အဲ့အောက်ခံပလတ်စတစ်အပြားရဲ့ အောက်မှာအပြန့်ခင်းထားလိုက်ရင်တော့ ချော်မထွက်တော့ဘဲ လှီးရတာ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်.. ရေစိုအဝတ်ဆိုပေမဲ့လည်း ရွှဲစိုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်.. ရေစွတ်ရုံလေးပဲ။
သံပရာသီးက အရည်သိပ်မထွက်လို့ ၂ လုံး ၃ လုံးလောက်ညှစ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါ။ သံပရာသီးဖြစ်ဖြစ် သံပရိုသီးဖြစ်ဖြစ် မိုင်ခရိုဝေ့ထဲကို စက္ကန့် ၂၀ လောက် အရင်ထည့်ပြီးမှ အရည်ညှစ်ကြည့်ရင် အရည်ပိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။
ကြက်ဥပြုတ်ကို အခွံခွာဖို့ အရမ်းပျင်းနေရင်တော့ ဒီလိုလေးစမ်းလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်.. ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥတွေကို အိုးတစ်လုံးထဲမှာ အကုန်အတူတူထည့်ပြီး လှုပ်ပေးလိုက်ရင် အခွံတွေက သူ့အလိုလိုကွဲလာပါလိမ့်မယ်.. အဲ့အခါကျမှ ရေဆေးလိုက်ရင် အခွံတွေကျွတ်ထွက်လာပြီး ကြက်ဥပြုတ်ချည်းပဲ သပ်သပ်ဖယ်လိုက်ရုံပဲ။ ချဥ်ရည်ဟင်းချက်ဖို့ဆိုရင် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော်.. တစ်လုံးစီခွာနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
နောက်တစ်ခုက ဓားတွေကို အမြဲထက်နေအောင် သွေးထားဖို့ပါနော်။ တစ်ခုခုလှီးတဲ့အခါမှာ ဓားကတုံးနေရင် ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်များပါတယ်.. ဓားတုံးနေရင် လှီးရတာ ဖြတ်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး လက်ကို ထိရှနိုင်ချေလည်း ပိုများတာမို့လို့ပါတဲ့။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ တစ်ခုခုကြော်လှော်တဲ့အခါမှာ ဒယ်ပြားထဲကို အကုန်လုံးစုပြုံပြီး မထည့်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ တစ်ခါတည်းနဲ့ အကုန်အများကြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မကျက်တဲ့ဟာတွေက မကျက်၊ ကျက်တဲ့ဟာတွေက ကျက်၊ တူးတဲ့ဟာတွေက တူး ဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။ ကဲ သိထားရမဲ့ အခြေခံအချက်လေးတွေလည်း သိပြီးပြီဆိုတော့ မီးဖိုချောင်ဝင်ဖို့ အသင့်ပဲလား?
ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ >>Kitchen Tips